Ingcaciso emfutshane kaFerdinand Magellan kunye nelifa lakhe
by U-Amanda Briney, uMbhali oXhasayo
Biography kaFerdinand Magellan
NgoSeptemba 1519, umqhubi wasePortugal uFerdinand Magellan wahamba ngomkhumbi weenqanawa zaseSpain ezinzame zokufumana iIspice Islands ngokubhekisa entshonalanga. Nangona uMagellan wafa ngexesha lohambo, ubizwa ngokuba yi-circumnavigation yokuqala yoMhlaba.
Isihloko sokuqala ukuya eLwandle
UFerdinand Magellan wazalwa ngo-1480 eSabrosa, ePortugal eya eRui de Magalhaes naseAlda de Mesquita. Ngenxa yokuba intsapho yakhe yayinobudlelwane nentsapho yasebukhosini, uMagellan waba yindwendwe indlovukazi yasePortugal emva kokufa kwakhe kwangaphambili ngo-1490.
Esi sikhundla njengephepha livumele uMagellan ithuba lokuba afundiswe kwaye afunde ngeendlela ezahlukeneyo zohambo lwePutukezi-mhlawumbi nezo zenziwa nguChristopher Columbus.
UMagellan uthatha inxaxheba eluhambeni lwakhe lokuqala lokuhamba ulwandle ngo-1505 xa iPortugal yamthuma eNdiya ukuba incede ifake uFrancisco de Almeida njengomqhubi wasePutukezi. Kwakhona wafumana imfazwe yokuqala apho ngo-1509 xa omnye wookumkani basekuhlaleni wayenqaba umvuzo wokuhlawula umvuzo omtsha.
Ukusuka apha, uMagellan walahlekelwa ngumncedisi uAlmeida emva kokuba ethathe ikhefu ngaphandle kwemvume kwaye watshutshiswa ngokuthengisa ngokungekho mthethweni kunye namaMorors. Emva kokuba ezinye iimangalo ziqinisekiswe ukuba ziyinyani, uMagellan walahlekelwa zonke izibonelelo zengqesho kwiPutukezi emva kwe-1514.
I-Spanish ne-Spice Islands
Ngeli xesha, amaSpeyin ayezama ukufumana indlela entsha ukuya kwiiSpice Islands (i-East Indies, kwi-Indonesia yangoku) emva koMnqophiso weTordesilla ulwahlula ihlabathi kwisiqingatha ngo-1494.
Umgca wokwahlula lo mbambano udabula i-Atlantic Ocean kunye neSpeyin yafumana amazwe aseNtshona-ntshona, kuquka iMelika. EBrazil, ke, waya ePortugal njengoko wenza yonke into esempumalanga yomgca, kuquka iNdiya kunye nengxenye esempumalanga ye-Afrika.
Ngokufanayo nomntu owayengummangaleli uColumbus, uMagellan wayekholelwa ukuba iIspice Islands ifikeleleke ngokuhamba nge-eNtshonalanga yehlabathi.
Wacetyisa le ngcamango kuManuel I, ukumkani wasePortugal, kodwa walahlwa. Ukufuna inkxaso, uMagellan waqhubeka ukuxelela isicwangciso sakhe kunye nenkosi yaseSpain.
Ngo-Matshi 22, ngo-1518, uCharles I wayekholelwa nguMagellan waza wamnika imali eninzi ukuze athole indlela eya kwiSpice Islands ngokuhamba ngentshonalanga, ngaloo ndlela unike iSpain ukulawula indawo, kuba kuya kuba "ntshona" umgca ohlula kwiAtlantiki.
Ukusebenzisa le mali, uMagellan uhamba ngomkhumbi waya ngasentshonalanga kwiSpice Islands ngoSeptemba 1519 ngeenqanawa ezinhlanu ( iConception, iSan Antonio, iSantiago, iTrinidad, neVictoria ) kunye namadoda angama-270.
Inxalenye yokuqala yohambo
Ekubeni uMagellan wayengumqhubi wasePutukezi ophethe iinqanawa zaseSpain, inxalenye yokuqala yendlela eya entshonalanga yayineengxaki. Amanqwanqwa amagosa aseSpeyin kwiinqanawa ekuhambeni kwenzelwe ukumbulala, kodwa akukho zicwangciso zazo eziphumelele. Abaninzi balaba bahlalutye babanjwe entolongweni kunye / okanye baphathwa. Ukongeza, uMagellan wayefanele agweme intsimi yasePortugal ekubeni wayehamba ngesiya eSpeyin.
Emva kweenyanga ezinqumla i-Atlantic Ocean, le nqanawa yamisa kwiiRio de Janeiro namhlanje ukubuyisela izinto zayo ngoDisemba 13, 1519.
Ukusuka apho, bawela emanxweme eMzantsi Melika bafuna indlela eya ePacific. Njengoko behamba ngomgama wangasentla, kunjalo, isimo sezulu sasiba sibi kakhulu, ngoko abasebenzi bahlala ePatagonia (eningizimu yezantsi eMerika) ukuba balinde ubusika.
Njengoko isimo sezulu saqala ukukhulula entwasahlobo, uMagellan wathumela iSantiago kwimishini yokukhangela indlela eya eLwandle lwePacific. NgoMeyi, iinqanawa zaphazamiseka kwaye iinqwelo-moya azizange zibuye zibuye zize zifike ngo-Agasti 1520.
Emva koko, emva kweenyanga zokuhlola indawo, iinqanawa ezine ezisele zafumana u-Oktobha kwaye zahamba ngomkhumbi. Le nxalenye yohambo yathatha iintsuku ezingama-38, zibiza i- San Antonio (kuba abasebenzi bayo banquma ukushiya i-expedition) kunye nemali eninzi. Nangona kunjalo, ekupheleni kukaNovemba, iinqanawa ezintathu eziseleyo zaphuma koko uMagellan wabiza iStrait of All Saints kwaye wangena e-Pacific Ocean.
Kamva ukuhamba kunye nokufa kukaMagellan
Ukusuka apha, uMagellan waphoswa ngephutha ukuba kwakuza kuthatha iintsuku ezimbalwa ukufikelela kwiIspice Islands, xa endaweni yoko yathatha inyanga ezine, ngexesha apho abasebenzi bakhe babandezeleka kakhulu. Baqala ukulambalala njengoko ukutya kwabo bekuphelile, amanzi abo ajika ajika, kwaye amaninzi amadoda aye athuthuka.
I-crew yakwazi ukuma kwisiqithi esiseduze ngoJanuwari 1521 ukuba sidle iintlanzi kunye nolwandle kodwa iimpahla zabo azizange zigcinwe ngokwaneleyo kwaMatshi xa zimi eGuam.
Ngomhla wama-28 Matshi, bawela ePhilippines baza bahlobo lomkhosi, uRajah Humabon kwisiqithi saseCebu. Emva kokuchitha ixesha kunye nookumkani, uMagellan kunye nabasebenzi bakhe baxhomekeke ekuncedeni isizwe ukuba sibulale intshaba yabo iLapu-Lapu kwisiqithi saseMactan. Ngo-Apreli 27, ngo-1521, uMagellan wathatha inxaxheba kwiMfazwe yaseMactan waza wabulawa ngumkhosi waseLapu-Lapu.
Emva kokufa kukaMagellan, u-Sebastian del Cano wayenokutshiswa kweConception (ngoko yayingeke isetyenziswe ngokumelene nabo ngabemi) kwaye ithatha iinqanawa ezimbini eziseleyo kunye nabasebenzi abayi-117. Ukuqinisekisa ukuba enye nqanawa yayiyayibuyisela eSpeyin, iTrinidad yajika empuma ngelixa iVictoria eqhubeka entshonalanga.
I-Trinidad ibanjwe yiPutukezi ngohambo lwayo lokubuyela, kodwa ngoSeptemba 6, 1522 iVictoria kunye nama-18 kuphela asebenzayo abuyele eSpain, agqiba ukujikeleza kokuqala komhlaba.
Nangona uMagellan wasweleka ngaphambi kokuba uhambo lugqitywe, udlalwa ngokubaluleka kokuqala kweMhlaba njengoko waqala ukukhokela uhambo.
Wabuye wafumanisa oko ngoku kuthiwa yiStrait of Magellan kwaye ubizwa ngokuba yi-Pacific Ocean kunye ne-South America iTierra del Fuego.
Amahlathi aseMagellanic kwiindawo ayebizwa ngokuba nguye, njengokuba abasebenzi bakhe bebokuqala ukuwajonga xa behamba ngomkhumbi kwi-Southern Hemisphere. Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-geography, kodwa ukuqonda kukaMagellan kwimeko epheleleyo yoMhlaba - into eyabancedisa kakhulu ekuphuhliseni ukuhlolwa kwendawo yangaphambili kunye nolwazi olubangelwa yihlabathi namhlanje.
Umthetho kaReilly we-Gravitation Act
I-Biography ye-Explorer Cheng Ho
I-Virginia Intermont College Admissions
Iingcamango zokuFunda kubafundi abaneTactile, isiCwangciso seKinesthetic yokuFunda
Iingoma ezili-10 eziphezulu zePop - Ehlobo 2000
I-Shotgun kunye nePistol
F. Scott Fitzgerald's Inspiration for "iGatsby enkulu"
2003 IWWE Iziphumo - Unyaka Wokuqala weMpawu eziPhumelayo zePVV
I-10 yee-Wave ezinkulu kakhulu ezingapheliyo kwi-Planet
IiRekhodi zehlabathi zePault Pole Pole
Iinqununu ezili-10 eziphambili zeR Rock
Iingcamango kwiAntumn: Iimviwo zeeNcwadi zoNyaka weNkula
I-Cosmos Isiqendu 13 Ukujonga iphepha lokusebenzela
Isicatshulwa seKhemist Virtual: Units & Measurements
Uluhlu olucacileyo lweeNamekliya zikaRhulumente
I-Boxing Day Soccer Tradition eNgilani
Indlela yokusebenzisa i-Waterbrush yokuPenda kwe-Watercolor
Ukufumanisa Injongo Yakho Yobomi
Ngaba i-Dinosaurs ihlala ihamba emhlabeni?
I-Requisitos y-traducción de actas de nacimiento para Inmigración
Indlela yokuBuza kwiSikolo soMthetho weeNcwadi zoNcomelo
Iingxelo zokuThengiswa Inkcazo (iKhemistry)
Zama ezinye iinguqulelo
Ziziphi Iibhloko Zezinto?